Aldi UK Xeerarka kuubanka
Bixinta Alaab-Dheeraad ah oo Bilaash ah oo Alaab Xul ah tag aldi.co.uk. Wadarta 19 firfircoon aldi.co.uk Xeerarka Horumarinta & Heshiisyada ayaa liisgaran oo kii ugu dambeeyay waa la cusbooneysiiyay Luulyo 14, 2021; 1 rasiidh iyo 18 heshiis oo bixiya ilaa 44% Off, Shixnad Bilaash ah iyo qiimo dhimis dheeraad ah, hubi inaad isticmaasho midkood markaad wax ka iibsanayso aldi.co.uk; Balanqaadka Dealscove waxaad ka heli doontaa qiimaha ugu fiican alaabta aad rabto.
Iibsashada Gaarka ah ee Aldi Sida Loo Adeegsado Aldi UK. Markaad isticmaaleyso Aldi UK, waxaad la kulmi doontaa laba nooc oo dalab ah - koodhka kuuboon iyo heshiiska. Markaad isticmaaleysid koodh xayeysiis, nuqul oo dhaji koodka inta lagu jiro sanduuqa lacag -bixinta, qiima dhimistuna si otomaatig ah ayaa loo adeegsan doonaa. Si kastaba ha noqotee, looma baahna in la koobiyeeyo oo la dhejiyo koodhka xayeysiinta inta la adeegsanayo heshiiska. Maxay Aldi UK Marna U Shaqayn?
Gaarsiinta Bilaashka ah ee Amarada £ 30 + Doorashooyinka Foojarka. Waxaan bixinnaa laba nooc oo foojarro ah kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu iibsado badeecooyin kala duwan. Hoos waxaa ku qoran waxa ku jira foojarka kasta: Waa maxay faa'iidooyinka? Badbaadada nabdoon ee lacag caddaan ah. Xaddidaadda waxaa lagu dabaqi karaa iibinta aalkolada, bakhtiyaa -nasiibka iyo waxyaabaha tubaakada. Taariikhda dhicitaanka 5 sano
Keydso Ilaa 50% Alaabada Yar ee Yar Kaalay bogga dhexdhexaadinta bulshada aldi.co.uk, waxaadna heli kartaa macluumaadka Kuuboonada Aldi ee Daabacan. HotDeals, oo ah goob kuuban aad u fiican, ayaa had iyo jeer soo aruurisa dalabyadii ugu dambeeyay, kuwaas oo ay ka mid yihiin, waxay sidoo kale bixiyaan foojarka aldi.co.uk iyo Kuuboonada kale ee la xiriira.